Lahatsary: “Aoka Izay: Tantaran’ny Revolisiona” Any Syria · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Desambra 2013 3:10 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, فارسی, বাংলা, عربي, English
Matthew VanDyke, ilay mpanao gazety Amerikana sy mpanao lahatsary fanadihadiana izay nandray anjara tamin'ny ady an-trano Libyana amin'ny maha-mpiady vahiny nanohitra ny tafik'i Kaddafi azy, dia nitady fanampiana tamin'ny alalan'ny fîtia tsy mba hetra mba hamokarana ny “Aoka Izay: Tantaran'ny Revolisiona”, horonantsary fohy izay mandrakitra an-tantara ny revolisiona Syriana sy ny antom-pisiany.
Ny lahatsary [Fampitandremana: Mampihoro-koditra ny sary], izay navoaka maimai-poana tao amin'ny YouTube tamin'ny volana Septambra 2013, dia mampiseho ireo sivily Syriana manao hetsi-panoherana ny fitondran'i Assad sy ireo mpikatroka teo ampihirahirana no nisy fipoahana mitranga. Mitondra antsika hanavatsara ny tanàna rava ao Aleppo (Homs) ny horonantsary ary mampiseho ireo olona mitam-piadiana izay sivily teo aloha saingy nivadika mpikomy miady ho amin'ny fahafahan'ny fireneny. Mikarajia (mi-chat) amin'ireo mpikatroka amin'ny teny anglisy ny tale raha misy re ao anatin'izany resadresaka izany ireo hirahira sasany sy ny resadresaka ao an-toerana amin'ny teny Arabo.
Tamin'ny teniny, ity lahatsary YouTube ity dia:
nahazo loka mihoatra ny am-polony ary voafantina tamin'ny fomba ofisialy tamin'ireo fetiben'ny horonantsary maherin'ny 75 mitranga manerantany. Namoaka ny horonantsary maimai-poana tao amin'ny aterineto tsy misy dokambarotra ny Tale Matthew VanDyke ny herinandro alohan'ny fotoana nomena satria IZAO NO FOTOANA mety ho ANAO mba handray fepetra ho fanohanana an'i Syria. HoronantsariNAO io.
” Aoka izay: Tantaran'ny Revolisiona” dia horonantsary fanadihadiana maharitra 15 minitra mikasika ny ady ao Syria, notontosaina sy novokaran'ilay Amerikana Matthew VanDyke sy Nour Kelze (mpanao gazety izay mpilalao fototra ao amin'ny horonantsary ihany koa).
Mitantara ny tolom-pahafahana an'i Syria ny horonantsary tahaka ny zava-niainan'ilay mpitari-tafika mpioko, Mowya, 32 taona sy ilay mpanao gazety vehivavy 24 taona , Nour Kelze tao Aleppo, Syria.
Mampiseho mazava sy fohy ny anton'ny nitoloman'ny vahoaka Syriana hoan'ny fahafahan'izy ireo ny horonantsary, voalaza amin'ny alalan'ny teny mampihetsi-po lalaovi'ireo mpilalao roa manana toetra matanjaka izay mitsimbadimbadika sy rovidrovitry ny ady ny fiainan'izy ireo.
Sady mampidi-doza no sarotra ny maka sarimihetsika ao Syria. Niatrika daroka baomba an-habakabaka, tifitra variraraka, tafondro sy fitifirana misy kinendry, ary fandrahonana mety hisian'ny fakàna an-keriny hatrany i VanDyke sy i Kelze. Fanampin'izany, nampangain'ny fitondran'i Assad ho mpampihorohoro i VanDyke tao amin'ireo fantson'ny fahitalavim-panjakana Syriana.
Ity ny horonantsary fohy azonao jerena: